#Somaliland: Wasiir Cabdullaahi #Abokor Oo Si Cadhaysan Uga Falceliyay #Faddeexado #Musuqmaasuq iyo Dhacdooyin #Foolxun Oo Guddoomiye #Faysal U Xanbaariyay - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Hargeysa(ANN)-Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Guriyaynta Cabdullaahi Abokor, ayaa si weyn uga cadhooday eedaymo la xidhiidha musuq-maasuq iyo fadeexado uu guddoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID, Eng. Faysal Cali Waraabe warbaahinta u mariyay Isniintii.
Wasiir Abokor oo daba socda eedaha musuq-maasuq ee guddoomiyaha UCID, la xidhiidhiyay, ayaa dhankiisa maanta ku tilmaamay Faysal Cali Waraabe inuu caqabad ku yahay dimuqraadiyadda Somaliland iyo nidaamka dhismaha qaranka.
Guddoomiye Faysal, ayaa ku eedeeyay Wasiirka Hawlaha Guud iyo Guriyaynta, Cabdullaahi Abokor inuu samaystay jabhad markii la xidhay ee xilka laga qaaday xukuumaddii Madaxweyne Siilaanyo, isagoo sidoo kale dhaliilay sababta Madaxweyne Biixi uga dhigay Wasiirka ee xisbigii uu ku tilmaamay argagixisada ugu mansabka ugu aaminay.
Guddoomiyaha UCID, wuxuu tilmaamay mashaariic uu sheegay inuu Cabdullaahi Abokor ku sameeyay musuq-maasuq oo malaayiin dollar lagu bixiyay, taas oo sababtay in dhaqaalihii ku baxayay mashruucaa ay joojiyaan dalkii bixinayay.
Dhinaca kale, Faysal, wuxuu ka sheekeeyay waxyaabo dhexmaray isaga iyo wasiirka muddadii doorashooyinka gollayaasha deegaanka iyo wakiillada lagu jiray hawshooda ee murrashaxiinta ay axsaabtu kala xulanayeen.
Hase yeeshee, Wasiir Cabdullaahi Abokor, ayaa jawaab ka ka bixiyay eedahaa iyo kuwo kale oo guddoomiyaha UCID, Eng. Faysal Cali Waraabe dusha u saray wuxuu ku hanjabay in ay sharciga ku kala baxayaan.
Muuqaalkan hoose ka daawo weedhaha ay labada masuul is weydaarsadeen.